Nyochaa ụzọ mmepe isii nke teknụzụ akụrụngwa na-esi na ITMA 2019 - Zhejiang Leinuo Textile Technology Co., Ltd.
ITMA abụrụla ihe omume dị egwu nye ndị na-emepụta akwa, yana mmalite nke teknụzụ ọhụrụ maka ụfọdụ ụlọ ọrụ ntanetị akwa akwa ụwa. N'ime ITMA a 2019 ihe ngosi, imirikiti nke ndị na-eji igwe eme ihe ga-esonye ọnụ ọgụgụ nke nlele, iche, njirimara na isi ọrụ aka ọrụ. Igwe a na-ejikọ ọhụụ na-etolite ngwa ngwa na ntanetị nke arụmọrụ dị elu, iche iche, njikwa netwọk na ngwaahịa nwere ọgụgụ isi, etc. Ihe ndị a bụ nkọwa zuru oke banyere isi mmepe mmepe nke teknụzụ akụrụngwa mkpuchi na afọ ndị na-adịbeghị anya site na akụkụ isii.
Ijikwa usoro teknụzụ dị mkpirikpi
German meyer-west gosipụtara igwe na-ejikọ okirikiri nke na-ejikọ aka na ntanye, nke nwere ike imebi usoro mmepụta ma nweta nsonaazụ pụrụ iche nke ngwaahịa ịkpụkọ ọnụ. Meyer, onye gosipụtara na Spinit 3.0 E na-agagharị - otu ihe eji eme okpo jacquard okirikiri, igwe na - ejikota onu na ijiri, na-emegharị ya na mgbaaka, usoro dị ọcha na nhazi, ebelata usoro a, nwere ike itinye ntanetị ma hichaa ya na akpaghị aka, nke nwere ike igbanwe nrụzi ntanetị na ntanetị nke yarn, yarn linear njupụta, na nguzosi nke eriri nile, dị ka ịkpụkọ jacquard mgbe nile.
Itkpụ etolite na ịkwa akwa
Site na ụbara ike nke ọrụ ike na mmụba nke ọrụ ọrụ, yana nnukwu ọrụ ike nke ụfọdụ ọkwá na ntinye aka na nhazi, mmepụta ihe abawanye na ụkọ. N'ọnọdụ a, formkọ ihe ọnụ na nkà na ụzụ aghọọla ihe dị mma na-eduzi mmepe. N'usoro nke akụrụngwa akụrụngwa nke okirikiri weft knitting, sm8-tr1s otu nwere igwe anaghị agba gburugburu na-egosipụta na santony bụ onye nnọchi anya, enwere ike iji ya mee uwe mkpuchi, Jaketị, Uwe egwuregwu na uwe ndị ọzọ na-enweghị nke ọma. Na igwe na-ejikọ ọnụ na teknụzụ akụrụngwa, onye nnọchi anya gosipụtara stoll ADF 24 ki 830 - Typedị W na CMS 830 ki wearable na kọmputa larịị igwe ịkpa akwa, aka seiki gosiputara MACH2VS213 komputara nzipu nke komputa zuru oke, nke ozo site na teknụzụ a kpara akpa, Nkwa ® ihe eji agbanye akwa eji agwo eji kpoputa ihe eji edozi aru na ihe ndi ozo, nwere ike mezue udi ihe niile a n’azu akwa ozo, na-ewepu ihe dị oke ọnụ ma na-ewe oge maka iwu mgbe sọọsọ, ezigbo okpukpu atọ ejiri ejiji.
Usoro agha nke na-ejikọ ihe ọnụ
Site na mmepe na-aga n'ihu na teknụzụ kọmputa na teknụzụ njikwa, nke etinyerela n’ọrụ n’ime ụdị igwe na-achịkwa ma na-akwọ ụgbọala, dị ka kọmputa flat knitting machine head drive / transverse / yarn, igwe agha igba agha, gbanyụọ / wepụ mbufe transversal / sere, igwe na-eji ngwa agha nke igwe na - egwu mmiri na - anagide uzo ochicho nke ihe di elu, ngwa ngwa omume, Kemgbe ọtụtụ afọ, a bụ nnukwu nsogbu nke igbochi igwe na-achịkwa ọnụọgụ ọhụụ nke igwe na-agba ngwa ngwa. HKS 3-m NA akwa ọsọ tricot warp knitting machine nke Carl meyer gosipụtara na ihe ngosi a nwere igwe mbadamba ihe eji ebu ihe 2 900 r / min, na-ekpocha ihe mgbochi ikpeazụ maka njikwa kọmputa zuru ezu nke igwe na-ejikọ ọnụ.
Ngwunye egwu 4p jacquard
Ndị RDPJ 6/2 Karl meyer gosipụtara EL okpukpu abụọ agịga akwa jacca warp knitting machine na ngosipụta a nwere ike iji mepụta akwa nwere ọtụtụ usoro 4D n'ihu na azụ azụ.. Shapedị ahụ, enwere ike idozi ọnọdụ na ịdị elu nke concave na convex nwere akụkụ atọ nwere onwe n'enweghị nsogbu. Enwere ike imepụta ihe ngosi dị nwayọ nwayọ ma ọ bụ ihe nkpuchi ma na-ebu ụzọ atọ nwere akụkụ atọ; Na mgbakwunye, enwere ike kesaa ntaneti dika odi ka ihe okike si acho iji nweta ume ma obu uzo.
Kniting teknụzụ ọgụgụ isi nwere ọgụgụ isi
N'afọ adịbeghị anya, na-aga n'ihu na-aga n’ihu nke ụkpụrụ ibi ndụ na-aga n’ihu na sayensị na teknụzụ na-aga n’ihu, itinye uwe nke nwere ọgụgụ isi dị ọtụtụ ma gbasaa ebe niile, nwere nnukwu ahia ha nwere. Carl meyer na-egosiputa ezigbo uwe elu T-shirt mere. Ejiri akwa a dabere na akwa akwa akwa na-ekpuchichara n'ụzọ abụọ, ihe nkpokọta oku nke okpomoku site na akpochapu ahihia okpu ahiri okpu ahihia rue uzo kwesiri ekwesi site na akwara eji aru oru guzobe, warp wiiti mmiri iru mmiri, ihe eji agbanwe akwa elektrik na waya na igwe ndi ozo, na ntinye maka usoro ihe omume na-agbanwe agbanwe, Ya mere, enwere ike iji ya mee ihe maka nleba anya obi ndi mmadu na - emeghari, ahụ ọkụ na iru mmiri nke uwe mara mma.
Ijikọ teknụzụ ntanetị
Carl meyer na-egosi KM ya tozuru oke. N ’sistemụ ime obodo dịpụrụ adịpụ, dika HKS 3 - M NA tricot ụdị igwe na-eji ngwa agha na-enye akwa na RSJ NA 4/1 ụdị igwe jacquard warp knitting bụ njikọ nke KM. Sistemu a NA network, nke Kevin Everett sit y jikọtara igwe na igwe ojii na - echedo igwe ojii, onye ọrụ ahụ nwere ike ịnwe oge ọ bụla na ebe ọ bụla nwere ike ị nyochaa data mmepụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ma na-ahụ ihe dị mfe maka ịrụ ọrụ na mmezi ya, mee ka igwe rụpụta ọrụ nke ọma.
Stoll gosipụtara na Knit ọgụgụ isi® usoro, nke jikọtara igwe eji emepụta akwa ọsụsọ na ntinye aka ya na usoro yana njikwa mmepụta ya, site na ngwa ngwa foto gaa na usoro ịka mma. A na-ahazi ihe osise n’ise ihe osise, A na-eji usoro ịma mma nke GKS mee ihe maka okike usoro na koodu ntinye, Emere M1PLUS na SIN faịlụ ozugbo, nke abanye n’ime sistemụ ndozi PPS iji jikwaa, mee atụmatụ ma bulie n’ichepụta ihe. N'ikpeazụ, emeputara emeputa na EKC (sistemụ ikpuchi isi ike) dika iwu si di, na etiti usoro achọghị njikwa ntuziaka.
Maka ama ndi ozo, biko gee nti "ihe mmepe ohuru nke ihe eji eme ihe eji eme ihe -- kwuru maka igwe egbe na ITMA 2019 ihe ngosi akwa nke mba uwa", issue 10 nke "ndu ederede".
NASA na-ekwupụta ọgbọ ọhụrụ nke oghere oghere. You mara ihe ọ bụla gbasara oghere?
Ulo mahadum emeputara Ionic conductive cellulose ma nwekwaa ike ịrụ ọrụ n'ọnọdụ onodu efu